बलिउडका कलाकारहरुको आत्महत्याको रहस्य : कारण अझैसम्म पनि खुल्न सकेको छैन | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
बलिउडका कलाकारहरुको आत्महत्याको रहस्य : कारण अझैसम्म पनि खुल्न सकेको छैन
| 154 Views | Published Date : 10th February 2018 |
एजेन्सी- बलिउड दुनियाँमा अपत्यारिला घटना भइरहने गर्छन्। फिल्ममा जस्तो चरित्र भेटिन्छ, कलकारको जीवन उस्तै हुँदैन। फिल्ममा हसाउने कलाकार आफ्नो रियल लाइफमा रोइरहेका हुन सक्छन्।
बलिउडमा यस्ता कलाकारले मृत्युवरण गर्नुपर्यो, जसको रहस्य गर्भमै छ अझै। उनीहरुले आत्महत्या गरेका हुन् या अन्य कारणले ज्यान गुमाउनुपर्यो? कारण अझसम्म पनि खुल्न सकेको छैन।
जिया खानलाई कसले उकास्यो?
निशब्द, हाउसफूल र गजनी जस्ता चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेकी जिया खानको शव २०१३ जुन ३ मा आफ्नै अपार्टमेन्टमा भेटियो। सुरुआतमा उनले आत्महत्या गरेको भनिए पनि उनकी आमाले बलिउड अभिनेता आदित्य पान्चोलीका छोरा सुरज पन्चोलीले छोरीलाई हत्या गर्न उकासेको आरोप लगाएकी थिइन्।
पछिल्लो वर्ष डिसेम्बरमा आएको खबरलाई मान्ने हो भने मृत्यु हुनभन्दा केही महिनाअघि जिया गर्भवती थिइन्। प्रेमी सुरजले जियालाई गर्भपतन गराउनका लागि केही औषधि दिएका थिए। त्यसपछि भ्रुणलाई पनि सुरजले नै ट्वाइलेटमा बगाएका थिए। यस घटनापछि जिया स्तब्ध बनेको बताइएको छ।
त्यसपछि सुरज पनि उनीसँग टाढा हुन थाले। जिया डिप्रेशनमा आइन् र केही दिनपछि उनको मृत्यु भयो। उनले आत्महत्या गरिन् वा उनको हत्या गरियो? यस विषयमा अनुसन्धान अझै जारी छ। बलिउडमा यस्ता थुप्रै घटना छन् जसको रहस्य अझै पत्ता लागेको छैन।
‘बालिका वधू’ निधनको कारण के हो?
चर्चित शो ‘बालिका वधू’ की आनन्दी अर्थात् प्रत्यूषा बेनर्जीको शव १ अप्रिल २०१६ मा उनकै फ्लाटमा झुन्डिरहेको अवस्थामा भेटियो। सञ्चारमाध्यममा आफ्ना प्रेमी राहुल राजबाट धोका पाएपछि उनले आत्महत्या गरेको समाचार सम्प्रेषण भयो। तर प्रत्यूषाका साथी तथा अभिभावकले यस घटनालाई हत्या बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले राहुलले हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्।
लडेकी थिइन् वा लडाइएको थियो दिव्या भारतीलाई
अभिनेत्री दिव्या भारतीको सन् १९९३ मा मुम्बईस्थित तुलसी अपार्टमेन्टको पाँचौ तल्लाबाट खसेर निधन भयो। अन्तिम सास लिँदै गर्दा दिव्याको उमेर केवल १९ वर्ष थियो। उनले आत्महत्या गरिन् वा उनलाई कसैले लडाइदिएको थियो? यस विषयमा प्रहरीले कुनै छानबिन गरेन किनकि स्पष्ट प्रमाण नै थिएन।
दिव्याले तमिल तथा तेलुगु फिल्ममा पनि उत्कृष्ट छाप छाडेकी थिइन्। उनले बलिउडका हिट फिल्म शोला और शवनम, दिल आशना है र दिवाना खेलेकी थिइन्।
परबिन बबीको मृत्यु रहस्यमा
चर्चित अभिनेत्री परबिन बबीको सन् २००५ मा आफ्नै फ्ल्याटमा शव भेटियो। उनी नशालु पर्दाथ सेवन गर्थिन्। तीन दिनदेखि उनको कोठाबाहिर फालिएका अखबार तथा दूधका प्याकेट टिप्न कोही नखाएपछि छिमेकीहरुले प्रहरीलाई खबर गरेपछि उनको शव फेला पारिएको थियो।
ढोका फोडेर हेर्दा कोठाभित्र परबिन मृत अवस्थामा थिइन्। उनको मृत्यु रहस्य अझै गर्भमै छ।
सिल्क स्मिताको मृत्युको मामिला अझै समाधान भएन
दक्षिण भारतीय फिल्मकी अभिनेत्री तथा गायिका सिल्क स्मिताको शव ३ सेप्टेम्बर १९९६ मा उनकै घरमा भेटिएको थियो। उनी पंखामा झुन्डिएको अवस्थामा थिइन्।
प्रहरीले यस घटनालाई आत्महत्या ठहर गरेको थियो। तर थुप्रै व्यक्तिले उनको मृत्युको कारण अन्य हुन सक्ने बताएका छन्। उनको मृत्यु मामला अझै सुल्झिएको छैन।
प्रेममा धोका पाएछि नफिसा जोसेफले आत्महत्या गरिन्?
टेलिभिजन मोडल तथा अभिनेत्री नफिसा जोसेफको मृत्यु पनि रहस्यमय छ।
सन् १९९७ मा मिस इन्डिया युनिभर्सको ताज जितेकी नफिसाको सन् २००४ मा निधन भयो। उनी आफ्नो कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। एमटिभीमा एक शो चलाउने गरेका कारण पनि उनी चर्चित थिइन्। उनले बिहे गर्नुभन्दा एक साताअघि मात्रै मृत्युको बाटो रोजेको थिइन्।
सञ्चारमाध्यममा उनका भावी पति पहिल्यै विवाहित रहेको र ती व्यक्तिको दुई वर्षअघि मात्रै सम्बन्ध विच्छेद भएको जानकारी पाएपछि स्तब्ध बनेकी नफिसाले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताइएको छ। तर खास कारण रहस्यमै छ। उनले हिट चलचित्र तालमा अभिनय समेत गरेकी थिइन्।
विवेका बाबजीको आत्महत्याको कारण के?
२००२ मा रिजिल भएको ‘ये कैसी मोहब्बत’मा अभिनय गरेकी विवेका बाबजी ३७ वर्षको उमेरमा मुम्बईस्थित आफ्नो कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन्। उनले आत्महत्याका लागि गरेको यो तेस्रो प्रयास थियो। १९९३ मा मिस मोरिसस वर्ल्डको उपाधि जितेकी यी मोडलले किन आत्महत्या गरिन्? कारण रहस्यमै छ।
मनोहन देसाई लडेकै हुन्?
अमर अकबर एन्थोनी, धरम वीर लगायतका चलचित्रका निर्देशक मनमोह देसाईको सन् १९९४ मा आफ्नो घरको बार्दलीबाट लडेपछि निधन भयो। केही सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार करिअरमा देखिएको गिरावटपछि डिप्रेशनको सिकार भएर उनी आफैँले मृत्युको बाटो रोजेका थिए।
गुरु दत्तको आत्महत्या सम्बन्धकै कारण हो त?
गुरु दत्तले ३९ वर्षको उमेरमा सन् १९६४ मा आत्महत्या गरे। उनले सन् १९५० र ६० को दशकमा प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी औ गुला, चौदहम्बीका चान्द लगायका हिट फिल्ममा अभिनय गरेका छन्।
गुरु दत्त पत्नी गीता दत्तसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि तनावमा थिए। यसैकारण उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने बताइएको छ।